Guinée Bissau Milaza fa hividi Covid Organics
Mitombo isa hatrany ireo firenena Afrikanina mieritreritra ny hanjifa ny tambavy Covid Organics.
Taorian` i RD Congo sy Senegal, izay nangataka santionany (échantillons) dia i Guinée Bissau no nanamafy ny fahavononany amin` izao. Nisy ny resaka nifanaovan` ny filoha Rajoelina sy ny filoham-pirenena any Guinée-Bissau, Sissoko Embalo, tamin` ny alalan` ny “Visio conference”. Nilaza ny filoha Embalo fa zava-dehibe no nahitan`i Madagasikara ity tambavy ity hahafahana miroso amin`ny fisorohana ny tsimok`aretina. Mila mahatoky an`Afrika isika, hoy izy. Manampy betsaka amin` ny fitsaboana ny fisotrohana tambavy vonona ka hanafatra avy hatrany ho an` ny mponina ao aminy ity filoham-pirenena ity ka tsy ho ela dia hisy ny ampahan'entana voalohany avy aty Madagasikara halefa any Guinée-Bissau.